Zava-dehibe ve ny fanatsarana ny votoatin'ny seo amin'ny sehatra SEO?
Ny mpikarakara maoderina tsirairay dia mahafantatra ny sandan'ny asa soratana avo lenta. Ao amin'ny tontolo nomerika ao amin'ny tranonkala, ny fahombiazan'ny tetikasa amin'ny aterineto rehetra, raha toa ka ara-barotra na tsy misy mihitsy, dia mibaribary indrindra amin'ny fanatsarana votoatim-pejy mifandraika amin'ny serivisy SEO izay mitazona ny lafiny tokana ao amin'ny pejy tsirairay voatsindry mba hanome ny lanjany lehibe indrindra ho an'ny traikefa tsotra tsy misy dikany. Mandritra izany fotoana izany, ny tanjona faratampony dia mitovitovy ihany - miakatra eny an-tampon'ny lisitry ny SERPs Google ary miaro ny toerana ambony ao anatin'ny lavaka.
Raha jerena ny laharana ambony ho an'ny orinasa izay aseho farafaharatsiny ao amin'ny pejy voalohany, dia mila ny tranonkala ho toy ny kanto sy ara-teknôlôjika izay ho hitan'ny tadiavin'ny fikarohana toy ny fampiasana tsara kokoa. Izany no mahatonga ny singa tsirairay amin'ny fahombiazan'ny aterineto, traikefa an-tserasera, ary ny teknolojia avo lenta, tokony hiara-miasa miaraka mba hamolavola fandrosoana ara-drariny sy maharitra - floradix iron herbs tablets. Ara-drariny ihany fa ny toerana notarihan'ny tranonkala dia nokarakarain'ny ekipa manana fahaizana matihanina nandritra ny taona maro. Miala amin'ny tanjona tratrany, matetika ireo manam-pahaizana dia mitazona ny lafiny rehetra amin'ny fanatsarana ny fikarohana amin'ny seo SEO na dia lehibe kokoa aza.
Noho izany, mazava tsara fa ny fifandraisana amina votoaty sy ny serivisy SEO dia nahitana fifandraisana tena izy, ka nahatonga ny fahombiazan'izy ireo tamin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny lafiny tsirairay avy amin'ny fahaiza-manaony. Na dia manatsara tanteraka ny votoatin'ny votoatin-javatra na ny serivisy SEO manontolo aza dia tsy maintsy dinihina miaraka amin'ny vondrona mpikirakira fatratra, na aterina any amin'ny toerana maro samihafa (raha tsy manana adidy ampy ny tompona tranonkala iray mba hampandehanana ny orinasa toy izany), tonga ny fanontaniana an-tsaina. Raha ny amiko kosa, manao ny asan'ny dokambarotra nomerika amin'izao fotoana izao, dia fantatro tanteraka ny fahasarotam-pahefana hamoronana votoaty tena tsara izay miasa. Mbola azoko atao ihany anefa ny manatanteraka ny asa rehetra momba ny fanatsarana ny votoatin'ny sehatra SEO raha tsy ny manam-pahaizana ihany. Mba hanaporofoana ny hevitro dia hamerina lisitr'ireo sombim-pikatrohana fototra ho an'ny votoatim-pifandraisana aho, amin'ny fandinihana ny fifantohana marina amin'ny fifamoivoizana ambony kokoa, ny fampisehoana bebe kokoa sy ny fiovam-po tsaratsara kokoa.
Mifantoha amin'ny votoatim-pahalalàna
Tsy midika mihitsy fa ny votoaty avo lenta izay manome lanja kokoa ny mpampiasa dia singa manan-danja amin'ny tranonkala mahomby. Ahoana anefa ny fomba hahafantarana tsara ny asa soratr'ireo asa soratra? Inona no fanatsarana votoatin'ny tranonkala SEO izay hahazo ny fankasitrahana tsara indrindra avy amin'ny Google? Andeha hojerentsika ireo fomba telo lehibe ampiasain'ireo fitaovam-pitadiavana mba hampisy fahasamihafana amin'ny votoaty "avo lenta" sy "ambany kalitao":
Ny fampiharana fitiliana dia ampiasain'i Google mba hahatakaran'ny fifandraisana amin'ny mpampiasa ny votoatiny. Raha ny marina, ny motera fikarohana dia hankasitraka ny taham-pidirana faran'izay kely indrindra (tahan'ny isan-jato izay mampiseho ny habetsahan'ny mpampiasa nandao ny tranonkala tamin'ny fotoana fohy, i. f. , tsy mamaky ny votoatiny mihitsy), ary ny fotoana lava be indrindra isaky ny fitsidihana.
Fanamarinana fidirana amin'ny fananana fahitana matanjaka matihanina amin'ny aterineto sy ny endriky ny indexing, tsy manitsakitsaka ny toro-làlan'ny SEO Google. Midika izany fa ny fampiasana ny Black-Hat SEO na ny Gray-Hat SEO teknika dia hosaziana amin'ny fisintonana ny tombony teo aloha, ary hatramin'ny fanesorana ny fahefana ananany. Noho izany, tsara kokoa ny misoroka ny fanodikodinana na ny fametahana.
Raha ny marina dia mampiasa olona mivantana i Google indraindray mba hamakafakana ny votoaty mifanaraka amin'ny Quality Grader Guidelines. Na dia toa tsy misy azo atao aza ny fampiasana ny mombamomba ny olona manerana ny tranonkala, dia mbola midika ihany koa fa na dia nahomby aza ianao nanosika ny boot crawling, mety ho voasazy ihany koa ianao.
Noho izany, mieritreritra aho fa ny vahaolana tsara indrindra azonao atao dia ny fahafantaranao ny zavatra ilaina sy ny fikasan'ny mpihaino anao ary ny fanomezana fotsiny ny olona izay tiany ho vakiana. Ataovy izany, aza hadino ny manao fanatsarana ny votoatin'ny tranonkala SEO mba hananana ny zavatra rehetra ataon'ireo manam-pahaizana.
DIY Content Optimization VS. Tolotra SEO avy amin'ny sampan-draharaha
Noho izany, andeha hojerentsika fa manana votoatiny tsara ianao, tena manan-danja ary manintona ny mpihaino anao. Amin'izany fomba izany, ny pejy web-nao dia mety hianika any an-tampon'ny valin'ny fikarohana Google. Fa etsy ankilany dia mety hahatratra ny fandrosoana tsara kokoa ianao amin'ny alàlan'ny fiasa amin'ny lafiny ara-teknika sasany mba hahatonga ny soratra ao amin'ny lahatsoratra ho tsara kokoa amin'ny fomba fijerin'ny motera fikarohana.
Eny, misy fomba maro samihafa ampiasain'ny orinasa SEO feno na orinasa matihanina matihanina. Mariho anefa, fa na amin'ny toe-javatra rehetra aza, ny dingan'ny fanasokajiana votoaty dia tokony hifantoka amin'ireto toetrany manaraka ireto:
toro-làlam-pitenenana tokony ho 1 000 isaky ny pejy;
voambolana voajanahary voajanahary, mifanaraka amin'ny toe-javatra LSI;
ny votoaty hita tafiditra amin'ny alim-pandaharam-potoana ho an'ny endriky ny endriky ny singa;
tranokala tsara tarehy vita amin'ny lohateny, dikanteny, ary meta;
ny lohateny lehibe H1 dia tokony hampiditra teny fototra manan-danja.
Mianara fotoana kely hanaovana fanatsarana ny fanaovana azy MISY, na inona na inona toe-javatra iainanao. Ny fananana pejy maimaim-poana dia hanampy anao hanangana ny faharetana maharitra mba ho hita eo amin'ny valin'ny fikarohana voalohany ho an'ny teny fanalahidy tianao. Raha manapa-kevitra ny hitantana azy amin'ny alàlan'ny tenany manokana ianao, dia afaka mampiasa fitaovana maimaim-poana azonao ampiasaina malalaka. Ny fampiasana ny sehatra an-tserasera toy ny GradeProof, LSIGRaph, na Hemingway App dia hanampy anao hitazona ny asa soratranao ho an'ny lohahevitra, madio madio sy madio, ary koa ho an'ny mpamaky ary mametraka ny fepetra voalohany amin'ny fizotry ny fizahana.
Raha manao izany ianao, dia hanatsara ny votoatiny izay mifanaraka amin'ny Search Engine Optimization. Farany, ireo mpangalatra ireo dia mihevitra fa mety hitranga tanteraka ny fandehanana amin'ny tsy misy SEO. Eny, afaka manana votoatim-pahalalàna be dia be izy ireo, mifanaraka tsara amin'ny mpihaino azy. Saingy mety ho toy izany ve ny vahaolana mety mahomby? Tsy mieritreritra aho. Raha ny marina, tsy misy teboka amin'ny fametrahana ny fotoananao sy ny ezaka amin'ny asa soratana avo lenta, raha tsy ampidirin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanodinana motera mivantana eo anoloan'ny mpamaky anao.